2015 ga-abụ oké afọ maka Apple n'ihi na ha na-azọrọ na nyak ọzọ ọgbọ nke a smartphone. Ọ nọwo na ọnwa 11 ebe ọ bụ na ntọhapụ nke iPhone 6 na iPhone 6 Plus na anyị bụ ndị o yiri nnọọ ka otu ọnwa n'ebe na-anụ ukara mara ọkwa maka ọhụrụ iPhone si Apple. Ọhụrụ iPhone-ezo dị ka iPhone 7 ma ọ bụ iPhone 6s Plus. Nnọọ, anyị amaghị na ukara aha maka ọdịnihu iPhone, ma anyị maara otu di na nwunye ihe a.
iPhone 7 bụghị nke asaa iPhone. iPhone 6 na iPhone 6 Plus ndị nke itoolu na nke iri iPhones. iPhone 7 bụ ihe anyị na-akpọ ndị ọzọ ọgbọ, na-esote nnukwu-ihuenyo iPhone igba egbe. Anyị kweere na mgbe ukara ntọhapụ, Apple ga-enye ọhụrụ iPhone na dịkarịa ala abụọ na nha.
Ma, ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-ka na-eche bụ nke a ga-ọhụrụ ekwentị na-iPhone 6s ma ọ bụ iPhone 7. Ọfọn, ka na-echetara onwe anyị banyere Apple si omenala akpọ mgbakọ. Ọ bụrụ na Apple ruo ya ọdịnala, mgbe ahụ, o yikarịrị na ndị ọhụrụ ekwentị ga-aha ya bụ iPhone 6s. N'ezie, nke a ekwentị nwere ike so na a ibu iPhone 6s Plus na a dị ọnụ ala karịa version ya, iPhone 6c. Ya mere, nke a bụ otu n'ime ndị isi Arụmụka na nnukwu àmà na ndị ọhụrụ iPhone ga-aha ya bụ iPhone 6s.
Otú ọ dị, ụfọdụ asịrị e-aga gburugburu n'ihi na a na nwunye nke afọ ugbu a. The rumo bụ na Apple na-enyocha ihe idobe na 'S' na-akpọ mgbakọ ahụ, n'ihi na ndị mmadụ aghọta na ọ na-ezighị ezi. N'ihi gịnị? Ọma, anyị na-ama nwere iPhone 6 na iPhone 6 Plus. The ngwaọrụ ọhụrụ kwesịrị ịbụ nnọọ dị iche iche si gara aga nsụgharị nke iPhone. Ọ na-kwesịrị ịbụ ndị ọzọ elu, ma ọ bụrụ na Apple-eme ka 'S' aha mkpado, mgbe ahụ, ndị mmadụ agaghị ọbụna inwe mmetụta na a ekwentị bụ ihe ọhụrụ. Ọ ga-ada ka dị nnọọ a n'itinyekwu nkume na-esonụ iPhone.
Ịtụle eziokwu na Apple ka a mara ọkwa ọhụrụ iPhone ga-adị otú dị iche iche, na-edebe gara aga aha-ada keadiuchemnso.
Ọzọkwa, dị ka Apple nyocha Ming-Chi Kuo, na-arụ ọrụ maka KGI Securities, agbala a amụma edeturu investors nke ọ na-ekwu na na Apple ga-ẹkedori ihe iPhone 7 na n'oge mgbụsị akwụkwọ 2015. Nke a pụtara na dum 6s ọgbọ ga-ọsọsọp kpamkpam. N'ihi gịnị? Ọfọn, ọ bụ kweere na Apple ga tinye a ịrịba nweta nkwalite atụmatụ na-esonụ iPhone: Force Touch. The igwe na 'S' ọgbọ nke iPhones emekarị adịghị enye ụfọdụ nnọọ akpali akpali ọhụrụ atụmatụ (dị ka Force Touch).
Ma, mgbe ahụ, ọzọ, ka anyị chee echiche banyere iPhone 5s. Mgbe iPhone 5s e wepụtara, Apple ẹkenam Touch ID wee 64-bit. Mgbanwe ndị a ibu, ma o doro anya bụghị nnukwu ezuru Apple na-awụlikwa elu ogologo iPhone 6. Ma, mgbe ahụ, ọzọ Force Touch bụ ụzọ nke a otu. Anyị ga-anọgide mgbagwoju anya ruo mgbe September mgbe Apple Olileanya ga-ekpughe ịrịba Ama maka ọhụrụ ekwentị.
Ị chọrọ ihe iPhone 7 ma ọ bụ onye iPhone 6s?
Ugbu a, na-anya ihe ụfọdụ ndị na-eche. Gịnị ka ha chọrọ ọzọ, iPhone 6s ma ọ bụ iPhone 7?
1. "Ọ ga-abụ maa ihe iPhone 6s"
iPhone 7 n'afọ ọzọ? na na mmadụ. Ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ anya maka ikpeazụ 4 ma ọ bụ 5 afọ apple nwere a na-agbanwe agbanwe ntọhapụ okirikiri. 1 afọ 6 na-esote afọ 6S. N'ezie apple pụrụ ịgbanwe nke ahụ ma na-aga nke tupu akụkọ ihe mere eme na ị-ada ka ị na-amaghị ihe ị na-ekwu banyere ya. 2016 ga-abụ afọ nke IPhone 7. Nke a bụ ihe na-ada ka a n'ezie rumo. Apple emesịala scaled n'ichepụta nke Liquid Metal nke ga-eji na ụlọ nke iPhone 7 ke 2016, ọ bụghị 2015. Unu nụrụ ya ebe a mbụ.
Isi Iyi: macworld.co.uk
2. "iPhone 6s N'ezie"
Ka anyị ghara ọsọ ihe. The iPhone 6 abịa n'ihu iPhone 6s na maa tupu iPhone 7. m maara na ị ụmụ okorobịa nwere oké obi ụtọ, ma nke a iPhone 7 bụ ka ihe karịrị afọ abụọ pụọ. Were a breather na ekwu okwu banyere iPhone ahụ bụ nanị 2 ọnwa pụọ.
3. "Echere m na ọ ga-abụ ihe iPhone 6s"
Bilie gị eziokwu nri ụmụ okorobịa. Anya na akụkọ ihe mere eme nke iPhone releases:
iPhone 6 + Ọzọ
iPhone 6S ma ọ bụ ụfọdụ ihe ndị ọzọ emepụta nke 6 bụ nke ukwuu-atụ anya.
Isi Iyi: telegraph.co.uk
4. "Ọ ga-abụ ihe iPhone 7"
Ọfọn, Echere m na m ga-agwa gị banyere ndị ọzọ rumo gburugburu-elu: iPhone 8 (ma ọ bụ ma eleghị anya iPhone 7, n'agbanyeghị Apple eme ya akpọ) anya na-atọhapụ gburugburu Sept. 2016.
Isi Iyi: macworld.co.ukintro
5. "Mkpa iPhone 7"
M na-eche iphone 6 bụ jọrọ njọ, azụ anya plastic na-echetara m nke a samsung. The iphone 5 dị mma. ha kwesịrị na-awụlikwa elu ogologo 7 n'ihi na 6 gbakwunyere bends, thhey mkpa a dum re-imewe na ekwentị na Olileanya ha ga-mimic anya fron iphone 5.
Isi Iyi: pocket-lint.com
6. "6s ga-esote"
Ọ bụrụ na anyị na-aga n'oge gara aga akụkọ ihe mere eme na Apple dị mma na nke a mgbe ọ na-abịa iPhone. Na-esote iPhone ga-6s na ga-ele anya yiri ka iPhone 6 ma nwere ọhụrụ atụmatụ, mma akụkụ na ga prolly idozi bendgate nke gbara ya gburugburu na iPhone 6 na 6 Plus.
7. "Mkpa iPhone 7!"
Ọ bụrụ na ọ 6s m na-aga n'ihi ya m ịgbanwee gaa na ihe ọzọ
A tọhapụ na-aga ịbụ yiri ntọhapụ nke ndị 4S / 5S. Nke a ga-abụ na ihe kwalite version nke 6, na otu ma ọ bụ abụọ obere mgbanwe na ikekwe otu 'ibu' mgbanwe nke ga-ere ya; na 5S mkpisiaka mmetụta maka ihe atụ. Echeghị m na wireless Nchaji ga-abịa ruo mgbe 2016, Otú ọ dị na ha na-aga na-mkpa karịa ọhụrụ igwefoto na kwalite ihuenyo mkpebi wdg na-achịkwa ndị mmadụ! Apple ga sere ihe nke akpa, ọ bụ nnọọ a nchere egwuregwu si ebe a na ...
9. "Kwesịrị iPhone 6s"
"Apple na-emekarị na-eme otu ihe ahụ imewe n'ihi ọgbọ abụọ nke iPhone, otú ahụ ọhụrụ, slimmer, Mkpa ọkụ na rounder imewe nke iPhone 6 na-atụ anya na-ebu n'elu ka iPhone 6, kwa." M na-aga na-royally PO'ed ma ọ bụrụ na iP6 ịke bụghị rụrụ n'elu ka iP6s kwa!
10. "Hope iPhone 7 ga-abịa tupu"
Echere m na anyị ga-ahụ iPhone 7 ke 2016 Ma enwere m olileanya nri gị! n'ihi na m ga-azụta iPhone 7 na September-enweghị ihe ọ bụla oge
Nke bụ eziokwu bụ, ndị mmadụ pụrụ na-arụ ụka na-arụrịta ụka banyere ihe ọhụrụ iPhone aha, ma ọ dịghị ihe ga-amara ruo mgbe Apple-egosi aha eze. Ịtụle mbụ kwuru eziokwu, ọhụrụ iPhone nwere ike ịkpọ iPhone 7. Ma, Apple nwere ogologo omenala na o yikarịrị na ndị ọhụrụ ekwentị ga na-iPhone 6s aha. Ọ bụrụ na ndị Force Touch bụ nanị ịtụnanya ọhụrụ mma, n'ezie, ọ bụghị a nnukwu ihe mere ezuru ụlọ ọrụ na-ikwu ya ogologo omenala. Apple Watch ugbua nwere nke a mma, n'ihi ya, ọ bụghị ihe ohuru.
> Resource> iPhone> ga-enwe iPhone 7 ma ọ bụ iPhone 6s?